Dhul Boobkii Ugu Xummaa oo Hargeeysa ka Socda | allsanaag
Dhul Boobkii Ugu Xummaa oo Hargeeysa ka Socda
Madaxweeynaha Maamul Goboleedka Hargeeysa, Muuse Biixi, wallaalkiis ayaa doonaya inuu ka dhaco dhul dad masaakiin ah ay leeyihiin. Ninkan dhul boobka u soo tafaxeetay ayaa lagu magacaabaa Cumar Biixi, waxaa kalloo isna qorshahan boobka ah kulla jira nin ay abti u yihiin.
Hadaba, shacabka beesha Isaaq ayaa u darsaday dawladdii Kacaanka taas oo iyadu dhul dadka ineey siiso mooyee aan ku saqajaami jiri dhulka dadka masaakiinta . Si kastaba ha ahaatee, waxyaabaha ay ku kacayaan siyaasiyiinta SNMta ayaa ah wax laga yaqyaqsoodo taas oo diinta islaamkana aysan meelna kaga jirin in miskiinka loo xoog sheegto.
← Previous Post Midab kala sooca Maryaha Hargaysa →